iib ah, iibin, iibiyey! - Tenants Victoria
iib ah, iibin, iibiyey!
Milkiilaha gurigu wuxuu iibin karaa hantida inta lagu guda jiro muddada ay kuu kiraysan tahay xitaa haddii aad haysatid heshiis (heshiis kiro) kiraysi muddo go’an. Heshiiskaaga kiradu wuxuu u socdaa si caadi ah.
[column width=”1/3″ place=”first” ][feature color=”ico-black” title=”this page” icon=”ico-hand-down” iconcolor=”ico-black”] guuraya
gelitaanka iyo kormeerka
sawirro xayeysiis ah
heshiis la gal milkiilaha guriga
gelitaan aan macquul ahayn ama sharci darro ah
heshiiska kirada iyo dammaanadda
ma inaan guuraa?
Sababta oo ah mulkiilaha ayaa iibinaya oo kaliya, micnaheedu maahan inay tahay inaad guurto. Haddii milkiilaha gurigu kaa rabo inaad ka guurto waa inay ku siiyaan Ogaysiis Bannayn.
Goorma ayay tahay inaan guuro haddii aan helo Ogaysiiska Bannaynta?
Haddii milkiilaha gurigu kaa rabo inaad ka guurto iibka awgeed, waxay ku siin karaan Ogaysiis Bannaynhaddii ay ku talo jiraan inay iibiyaan hantida oo bannaan isla markiiba ka dib markii Ogaysiiska Bannayntu dhammaado. Haddii ay mar hore saxeexeen heshiis iib oo ay doonayaan inaad ka guurto, waxay u baahan yihiin inay ku siiyaan Ogaysiis aad ku Bannayso 14 maalmood gudahood marka la saxiixo heshiiska iibka, ama marka shuruudaha heshiiska oo dhan la buuxiyo. Tan macnaheedu waa iyagu kama fiirsan karaan dhawr bilood ka dib markay saxeexaan heshiiska ka dib u isticmaalaan iibka sababta Ogaysiiska Bannaynta.
Ogaysiiska Bannaynta waa in lagu siiyaa ugu yaraan 60 maalmood kahor taariikhda ay kaa doonayaan inaad baxdo.
Haddii aad kujirto heshiis ijaarasho oo go’an, waxaad xaq u leedahay inaad joogtid ilaa dhammaadka muddadaada go’an. Markaa, taariikhda Ogaysiiska Bannayntu ma noqon karo ka hor dhammaadka muddadaada go’an, inaad oggolaato inaad ka baxdo waqti hore.
goor hore ma bixi karaa?
Haddii aad ku jirtid heshiis kiro muddo go’an oo aad rabto inaad goor hore guurto maxaa yeelay hantida oo la iibinayo (ama waa la iibiyay), waad awoodi kartaa inaad soo afjarto kiradaada goor hore haddii milkiilaha gurigu oggolaado.
Hubso inaad ka dhigto heshiiska qoraal iyo inuu saxiixay milkiilaha guriga ama wakaalo ama waxaad bixin kartaa kharashaadka jabinta heshiiska kirada .
Haddii aad kujirto heshiis kiro xilli ku xiran (tusaale ahaan bil ilaa bil) oo aad helaysid Ogaysiiska Bannaynta oo 60 maalmood ah, waad ka guuri kartaa ka hor intaysan 60-ka maalmood gaarin. Laakiin waa inaad siisaa milkiilaha guriga ama milkiilaha cusub ogaysiis qoran ugu yaraan 14 maalmood intaadan bixin. Sidoo kale waa inaad bixisaa lacagta kirada/ijaarka 14-kan maalmood, xitaa haddii aad dhaqsi u guurto.
ma heli karaa magdhaw markaan xilli hore guuro?
Haddii milkiiluhu kaa doonayo inaad guurto ka hor dhammaadka muddadaada go’an, waxaad waydiin kartaa xoogaa magdhaw ah dhibaatada ku soo gaaraysa awgeed. Haddii ay oggolaadaan magdhaw, heshiiska qoraal ka dhig oo hubso inaad saxiixdeen adiga iyo milkiilaha hadda ama kan cusub, midka doonaa ha lahaado hantida waqtigaas oo ku siinayo magdhawga eh, ama wakaaladooda.
Kirayste ahaan waxaad xaq u leedahay ku ‘raaxaysiga’ gurigaaga kirada ah sidaa darteed milkiilaha gurigu waa inay hubiyaan inay ilaaliyaan xuquuqahaaga haddii ay doonayaan inay soo galaan gurigaaga.
Miyaan bixiyaa lacag nadiifinta?
Uma baahnid inaad gasho dadaal ama kharash gaar ah (tusaale ahaan sameynta nadiifin dheeraad ah adigu ama shaqaaleysiinta nadiifiyayaal) si aad hantida uga dhigto mid soo jiidasho u leh cidda iibsan doonta. Waxa kaliya ee sharci ahaan lagaa rabo inaad sameyso waa inaad ku ilaalisaa dhismaha ‘xaalad macquul ah xagga nadaafadda’.
xuquuqda milkiilaha guriga
Milkiilaha gurigu waxay xaq u leeyihiin inay tusaan hantida ‘ciddii iibsan rabta’ markay buuxiyeen dhammaan shuruudaha gelitaanka sharciga ah inta aysan gurigaaga soo gelin.
u furan kormeerka
Laakiin in kasta oo milkiilaha gurigu uu muujin karo iyadoo uu u marayo ‘cidda iibsan rabta’, sida uu dhigayo sharciga jira milkiilaha gurigu uma laha xaq inuu sameeyo ‘kormeeris furan’ umana baahnid inaad u oggolaatid milkiilaha guriga inuu u soo galo gurigaaga sababtan awgeed. (Eeg Higgerson v Ricco (Guriyaha Kirada ah)  VCAT 1214.)
goormay geli karaan?
Milkiilaha guriga (ama wakaaladu) waxay geli karaan hantida iyagoo wada cid iibsan rabta:
markasta oo aad oggolaato, laakiin milkiilaha gurigu waa inuu helaa oggolaanshahaaga isla usbuuca markuu doonayo inuu galo hantida. Si kale haddii loo dhigo, kuma weydiin karaan wax ka badan 7 maalmood ka hor inta aysan bilaabin inay galaan. Waa fikrad fiican inaad ku hesho codsiga qoraal oo adigana kaga jawaabceliso qoraal ahaan xitaa haddii ay tahay farriin qoraal ama emayl ah. Sidan ayaad ku heli doontaa diiwaan sax ah wixii aad kula heshiisay.
xiitaa haddii aysan kaa haysan oggolaanshahaaga, laakiin waa inay:
ku siinayaan ogaysiis qoran ugu yaraan 24 saacadood ka hor inta aysan bilaabin inay galaan. Ogaysiiska waa inay kujirtaa sababta ay u rabaan inay u galaan hantida oo adiga gacanta lagaaga dhiibaa inta u dhaxeysa saacadaha 8-da subaxnimo iyo 6-da galabnimo ama boostada laguugu soo diraa. Haddii ogaysiiska lagu soo diro boostada, waa inay ku daraan waqti ku filan oo boostada laguugu soo diro maadaama 24-ka saac ay bilaabanayso markaad hesho ogaysiiska, maa ahan markii la qorey ama la soo dhigayey boostada. Fiiri waqtiyadda keenista boostada ee Australia. Milkiilaha guriga ayaa kugu siin kara ogaysiiska habka elektarooniga ah sida emaylka haddii aad oggolaato (ka fiiri bilaabista kiraysi macluumaad dheeri ah oo ku saabsan aqbalaadda ogaysiisyada si elektaroonig ah in laguugu soo diro).
kaliya gal inta u dhaxeysa 8-da subaxnimo ilaa 6-da galabnimo
ha gelin fasaxa dadweynaha
intee ayey joogi karaan?
Iyagu ma sii joogi karaan wax ka badan inta lagama maarmaanka u ah cidda iibsan rabta inay kaga bogato hantida.
Maxaa dhacaya haddii aanan guriga joogin?
Haddii milkiilaha gurigu u buuxiyey dhammaan shuruudaha gelitaanka sida sharcigu dhigayo oo uu ku siiyay ogaysiin, wuxuu geli karaa hantida haddii aad guriga joogtid iyo haddii kaleba.
maxaa dhacaya haddii aanan helin ogaysiis?
Haddii aadan helin ogaysiis qoran oo aad guriga joogtid markii milkiilaha guriga, ama wakaaladu, yimaaddeen uma baahnid inaad u oggolaatid inay gudaha galaan.
Waa dambi in milkiilaha gurigu ama wakaaladu ay gurigaaga soo galaan haddii aysan haysan oggolaanshahaaga oo ayna ku siinin ogaysiis macquul ah, haddii ay jirto cududaar macquul ah mooyee, sida xaalad gurmad ah. Waxaad u sheegi kartaa dembiga Consumer Affairs Victoria kuwaas oo soo saari kara ogaysiis sharci jebin oo ku aaddan milkiilaha guriga ama wakaalada haddii ay ku guuldarraysteen inay raacaan sharciga.
Iyada oo qayb ka ah iibinta hantida, wakiilada ayaa badanaa doonaya sawirro loogu talagalay boodhka iibka iyo xayeysiinta internetka.
Sharciga ma siinayo milkiilaha guriga xuquuq uu ku galo gurigaaga si uu sawirro uga qaato iyadoo ujeeddadu tahay xayeysiinta hantida si loo iibsado.
Maadaama milkiilaha gurigu aanu xaq u lahayn, waxaad kartaa inaadan u oggolaanin inay soo galaan. Haddii aad rabto inaad u oggolaato gelitaanka sababtan awgeed waxaad ku heshiin kartaa waxa la sawiri doono iyo sida sawirrada loo adeegsan doono. Waxaad ku adkaysan kartaa in sawirqaadaha uu la socdo milkiilaha gurigu ama wakaalada hantida ma-guurtada ah.
Haddii aad u maleyneyso in sawirrada muujinaya waxyaabaha aad haysato ay kordhin karaan halista tuugada, waa inaad dabooltaa ama meesha ka qaaddaa wixii alaabo qiimo leh ka hor inta aan sawirro la qaadin.
Haddii aad u maleynaysid in sawirradu ay jabin doonaan asturnaantaada sababtoo ah waxa si cad loogu aqoonsan doonaa adiga ama xubin qoyska ka mid ah, kala xiriir Guddoomiyaha Macluumaadka ee Australian-ka halkan 1300 363 992 si uu talo kuu siiyo.
Waxaad isku dayi kartaa inaad heshiis kala gasho milkiilaha guriga ama wakaalada goorta iyo sida aalaaba ay u soo geli doonaan gurigaaga. Waa muhiim inaad qoraal ka dhigto oo aad hubiso inuu adiga iyo milkiilaha guriga ama wakaaladu aad saxeexdaan.
Heshiiska waxaa ku jiri kara shuruudo ay ka mid yihiin:
Milkiilaha guriga ama wakaaladu waxay keliya tusayaan hantida cidda iibsan rabta haddii ay u qabteen ballan kugu habboon.
Milkiilaha gurigu ama wakaaladu ma ama aha inuu hantida ‘u soo galo kormeer’
Waxaad bixin doontaa lacagta kirada intii hore wax ka yar magdhaw ahaan marka la eego khalkhal galinta iyo faragalin ku timi raaxadaada ee ay keeneen dadka gelayaa
Milkiilaha gurigu ama qof kastoo kale uma geli doono hantida ujeeddada ah inuu sawirro ka qaado oggolaansho la’aan
Sawirqaaduhu wuxuu geli doonaa dhismaha kaliya haddii uu weheliyo milkiilaha gurigu ama wakaalada hantida ma-guurtada ah waana kaliya waqtiga aad joogi karto
Haddii aad u maleyneyso gelitaanka gurigaaga ee milkiilaha guriga ama wakaalada macquul inayna ahayn maxaa yeelay waxay carqaladeyneysaa raaxadaada guriga aad ka kiraysatay, waxaad qaadi kartaa tallaabooyin aad ku xakameyneyso soo gelitaankooda.
maxaa macquul ahayn?
Haddii milkiilaha guriga ama wakaaladiisu aysan ku siin ogaysiis ku filan, haddii ay dadka tusaan marar aad u badan ama ay muddo dheer joogaan, taasi waxa laga yaabaa in loo arko wax aan ‘macquul ahayn’.
dalbo amar xakamayn
Haddii aad u maleyneyso in milkiilaha guriga aysan wixiisu macquul ahayn, waxaad dalban kartaa amarka xakamaynta VCAT. Waxaad u baahan doontaa caddeyn ku saabsan waxa dhacay. Tusaale ahaan, waxaad ku qori kartaa taariikhaha iyo waqtiyada dadka la tuso hantida iyo inta ay joogaan mar kasta.
Codsiyada amarada xakamaynta ayaa mudnaanta la siiyaa marka la eego codsiyada aan degdegga ahayn dhageysiguna wuxuu ku qabsoomi karaa dhawr maalmood gudahood. Waa fikrad fiican inaad la hadasho VCAT maalinta ka dambaysa markaad soo gudbisay dalabkaaga si aad u hubiso haddii ay taariikh dhageysi u qabteen. Haddii aysan qaban, wac maalinta xigta. Haddaad ka maqnaato dhageysiga, VCAT waxa dhici karta inay u xukunto milkiilaha guriga.
Haddii milkiilaha gurigu uusan qaadin tallaabooyin macquul ah si loo hubiyo inaad raaxo ku haysato dhismahaaga markaa waa jebin waajibaadkiisa, waxaanad awoodi kartaa inaad ka doonto magdhaw . Waxa kale oo aad awoodi kartaa inaad ka doonto magdhaw haddii alaabadaada la xado ama la waxyeelleeyo inta ay guriga kujireen.
Ma u baahanahay heshiis cusub?
Maya. Haddii hantida la iibiyo, heshiiskaaga kiradu wuxuu u sii socon sida caadiga ah iyadoo dhammaan shuruudaha iyo xaaladuhu sidooda iska ahaan doonaan (oo ay ku jiraan lacagta kirada ee aad bixiso, sida iyo goorta aad bixiso, iyo taariikhda marka waqtiga go’an uu dhammaanayo). Waxa keliya ee isbaddalaya ayaa ah in milkiilaha cusub uu qaato xuquuqda iyo waajibaadka milkiilaha guriga. Waa inaad heshaa warqad kuu sheegaysa magaca milkiilaha guriga ee cusub.
maxaa ku dhacaya dammaanaddayda?
Marka la iibiyo hantida, milkiilaha cusub iyo milkiilaha hore labadaba waa inay ogaysiiyaan Residential Tenancies Bond Authority (RTBA). Dammaanaddaadu waxay ku sii jiri gacanta RTBA ilaa dhammaadka muddada kirada. Haddii milkiilaha guriga magaciisu ku yaalay foomka Dhigista Dammaanadda, waa inaad ka heshaa warqad RTBA taasi oo caddaynaysa magaca milkiilaha guriga ee cusub. Haddii magaca wakaalada hantida ma-guurtada ah uu ku yaalo foomka Dhigista Dammaanadda, waxba isma baddalayaan.
Xeerka Kiraysiga Guryaha ee 1997 (AustLII website)
qaybta 67 – ku raaxaysiga
qaybta 85 – galista dhismayaasha kiraysan
qaybta 86 – sababaha galitaanka
qaybta 91 – ka dalbashada VCAT amar xakamayn
qaybta 91A – dambiga galista dhismaha iyada oon la buuxin shuruudaha
qaybta 259 – ogaysiiska bannaynta guriga si loogu iibiyo
Xukunka VCAT ee u furista kormeeris
Higgerson v Ricco (Guryaha Kirada ah)  VCAT 1214
marka milkiilaha gurigu jebiyo waajibaadkooda